Nin la sheegay inuu ka mid ahaa raggii weeraray xaruntii C/weli Cali Cilmi ee Gaalkacyo oo… – Hagaag.com
Nin la sheegay inuu ka mid ahaa raggii weeraray xaruntii C/weli Cali Cilmi ee Gaalkacyo oo…
Posted on 20 Nofeembar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa la horgeeyay nin la sheegay in uu kamid ahaa ragii weeraray xarun Koonfurta magaalada Gaalkacyo ku lahaa Wadaad lagu magacaabi Jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare.
Cabdullahi Cali Maxamed ayaa lagu eedeeyay in uu kamid ahaa ragii weerarka ku qaaday xarunta ku taalay Gaalkacyo, waxaana ninkan intii weerarka socday gacanta ku dhigay ciidanka dowlada oo u gurmaday xarunta la weeraray.
Maxkamada ciidamada ayaa la horgeeyay cadeymaha in ninkan kamid ahaa ragii weeraray xarunta kutaalay magaalada Gaalkacyo iyo qorigii uu watay, waxaa sidoo kale Maxkamada la horkeenay marqaatiyaal.
Xeer ilaaliyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in Cabdullahi Cali uu yahay Shabaab galay dambiga lagu soo eedeeyay ,waxa uuna garsoorka Maxkamada ka codsaday in xukun dil ah lagu rido.
Gudoomiyaha Darajada koobaad ee Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa soo gabo gabeeyay dhageysiga dacwada ninkan loo heystay, waxa uuna Gudoomiyaha sheegay in maxkamada go’aanka xukunka ninkan gadaal kasoo gaari doonto.
Weerarka lagu qaaday xarunta Gaalkacyo ku taalay ayaa lagu dilay dad badan uu ku jiray wadaadkii xarunta lahaa oo lagu magacaabayay Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo caan ka ahaa Koonfurta Gaalkacyo.
About Admin (11496 Articles)